Abathengi bazama ukufikelela kuwe kwimithombo yeendaba, Ngaba ukhona? | Martech Zone
NgoMvulo, Novemba 3, 2014 Douglas Karr
I-5 kuzo zonke izicelo ezi-6 ezenziwe ngabathengi kwimidiya yoluntu ukuya kwishishini ungaphendulwa. Amashishini aqhubeka esenza impazamo eyoyikisayo yokusebenzisa amajelo asekuhlaleni njengosasazo kunokubona ifuthe lawo njengonxibelelwano. Kudala-dala, iinkampani zaziqonda ukubaluleka kokulawula iminxeba engenayo kuba ulwaneliseko lwabathengi lubangelwa ngqo kukugcina kunye nokunyusa ixabiso labathengi.
Umthamo we izicelo zosasazo lwasentlalweni zonyuke nge-77% unyaka ngaphezulu konyaka. Kodwa impendulo ibe kukunyuka kwe-5% kuphela ngamashishini. Esi sisithuba esikhulu! Kutheni le nto izicelo zentlalo zingaqwalaselwa ngokufanayo? Uqikelelo lwam kukuba abathengi abalindelanga mpendulo njengoko besenza ngefowuni ukuze bangakhathazeki njengoko besenza xa behleli kwifowuni engaphendulwanga. Kodwa i ithuba lamashishini ukwenza ifuthe kwezentlalo lukhulu kakhulu kumashishini amaninzi… ngakumbi sisazi ukuba abo sikhuphisana nabo abaphenduli!
Kunyaka ophelileyo, ezinye izinto ezimangalisayo ziye zavela kwincoko yemidiya yoluntu phakathi kweempawu kunye nabathengi. Ishishini lezeNtlalontle libonelela ngesishwankathelo esikhawulezileyo sobabini kunye neendlela ezithile zeshishini.
The Ihlumelo Index yeNtlalo yingxelo edityanisiweyo neyakhutshwa yiSprout Social. Yonke idatha ekubhekiswa kuyo isekwe kwiiprofayili zentlalo ezili-18,057 (9,106 Facebook; 8,951 Twitter) yeeakhawunti ezisebenza ngokuqhubekayo phakathi kweQ1 2013 kunye neQ2 2014. Ngaphezulu kwesigidi esi-160 semiyalezo esithunyelwe ngeloxesha sahlalutywa ngeenjongo zale ngxelo.
tags: Ukumamela ngokwasentlalweniizibalo zokumamela ekuhlaleniizicelo zemidiya yoluntuukuhluma kwezentlalokuhluma isalathiso sentlalontle
Zeziphi ezona ndidi zoMxholo ziBandakanyekayo kwi-Intanethi nakwiselfowuni?